Qalabka Qalabka - Laser Dahab ah
MAADDADA AYAA CO2 MAKIINADAHA LAASASKA KU SHAQEEYA?
Dahabka Laser CO2 mashiinada leysarka ayaa gooyn kara oo xardhi kara / calaamadeyn kara qalab kala duwan.
Jadwalka hoose wuxuu muujinayaa tusaalooyin kooban oo ah alaabooyin badan oo aad kula shaqeyn karto mashiinnada Laserka Dahabiga ah!
Fadlan la soco in nooca leysarka ee loo baahan yahay in lala shaqeeyo qaar ka mid ah qalabkan uu kala duwanaan karo. Jawaabahaas waxaa iska leh CO2 noocyada leysarka, kuwaas oo daboolaya qaar ka mid ah mashiinnada kala duwan.
Qalabka jarista sida biraha ayaa suurtagal ah midkood fiber laser ama YAG laser, iyadoo kuxiran codsiga - fadlan nala soo xiriir si aad wax badan uga ogaato.
CO2 Mashiinnada Laser
Birta dahaarka leh
Maaddada isku dhafan
Koloriin Polyvinyl (PVC)
Ma Raadineysaa inaad la shaqeysid Birta?
Kala duwanaanta mashiinada jarista birta waxay ku siineysaa awooda aad ku goyso kuna xoqdo noocyo badan oo kala duwan oo bir ah, adoo adeegsanaya leysarka fiber
Biraha ku habboon waxaa ka mid ah:
Maaddadaadu miyaanay liis gaarin?
Haddii aad haysato waxyaabo gaar ah oo ku saabsan wax soo saarkaaga oo aad rabto inaad ogaato sida ay uga falcelin doonto jarista laser ama la xardho, fadlan nala soo xiriir si aad tusaale noogu soo dirto si aan u tijaabino.
Fadlan la soco in qoto dheer jarista iyo xawaaraha jarista alaabada kaladuwan ay ku kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran awoodda iyo nooca mishiinka. Boggan waxaa loogu talagalay hage ahaan, iyo jarista saxda ah iyo kartida calaamadeynta mashiin kasta way kala duwanaan doontaa iyadoo kuxiran qeexitaankiisa saxda ah. Faahfaahinta saxda ah, fadlan la xiriir HALIS DAHAB AH.